मेला महोत्सवमा व्यापार बढ्दैछ तर रुचि घट्दैछ , किन ? थाहा पाउन पढ्नुहोस् पुरा समाचार ⋆ ए टु जेड समाचार डट कम - ए टु जेड समाचार डट कम
मेला महोत्सवमा व्यापार बढ्दैछ तर रुचि घट्दैछ , किन ? थाहा पाउन पढ्नुहोस् पुरा समाचार
२३ पुष २०७५, सोमबार १६:३२
ए टु जेड समाचार , चितवन , २३ पुष । चितवन मुलुककै हरेक कुरामा केन्द्र बन्दै गएको छ । सकारात्मक कुरा होस् या नकारात्मक चितवन जुनसुकै पक्षको केन्द्र बन्नबाट भने अछुतो रहेको पाईदैन । यस्तै चितवनमा विशेषगरी लाग्ने मेला महोत्सवको पनि केन्द्र बनेको छ ।
यी मेला महोत्सवबाट हुने थुप्रै फाईदा र बेफाईदाका बारेमा भने कुनै चर्चा परिचर्चा भएको पाईदैन । मेला महोत्सवमा हुने व्यापार र नाफा घाटाको आंकलन गरेर कत्तिको सफल वा असफल भनेर मापन गर्ने हुँदा यसले जनमानसमा पारेको सकारात्मक वा नकारात्मक असरबारे बुझ्ने मौका नै पाईएको हुँदैन । जसले गर्दा कम्तीमा करिव महिनामा एक पटक चितवन जिल्लाको एक/एक स्थानमा यस्ता महोत्सवको आयोजना गरिन्छन् । तर यहाँ आउनेहरुको संख्यामा स्थीरता भएपनि अवलोकन पश्चात केही न केही खल्लो अनुभुति भएको पाईन्छ । तसर्थ मेला महोत्सव आयोजकले अवलोकनकर्ताले के कस्ता बस्तुको आवश्यकता महसुस गरेका छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्दै महोत्सव आयोजना गरे पक्कै व्यापारिक र सुरुचिपुर्ण समापन हुने थियो कि ?
मेला महोत्सवमा हुने कमी कमजोरी के कस्ता रहने गर्दछन् र यिनको समाधान के छ भन्ने विषयलाई लिएर चितवन पोष्ट दैनिकमा आज प्रकाशित हरिप्रसाद अधिकारीको विचारलाई हामीले जस्ताको तस्तै साभार गरेका छौँ । पढ्नुहोस महोत्सव आयोजकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु :
आजभोलि हाम्रो देशको प्रायः सबैजसो जिल्लाहरु महोत्सवमय बन्न पुगेका छन् । अझ विशेषगरी चितवन जिल्ला महोत्सव सञ्चालन गर्ने जिल्लाहरुको दौडमा अग्रिम स्थानमा रहेको सत्यता सबैलाई ज्ञात नै छ । स्थानको नामसँग जोडिएर, साँस्कृतिक पर्वसँग जोडिएर, खाना तथा परिकारसँग जोडिएर तथा विविध कार्यक्रमसँग जोडिएका महोत्सवहरुले गर्दा चितवन महोत्सवमय बन्न पुगेको छ । वास्तवमा महोत्सव भन्नाले ठूलो उत्सव तथा पर्व भन्ने जनाउँदछ । यस्ता महोत्सवहरुले आफैँमा एक प्रकारको मह¤व अर्थात उद्देश्य बोकेको हुन्छ । जुन उद्देश्य देश, समाज तथा आमजनताका जनजीविकाका प्रश्नहरुसँग गाँसिएको हुन्छ । तसर्थ महोत्सव भन्नाले आमजनतासँग गाँसिएका अनेकन समस्याहरुको गाँठो खोल्न सञ्चालन गरिएको सत्यकर्मलाई नै जनाउँदछ ।
तर, अचेल मनाइने अनि आयोजना गरिने अनेकन महोत्सवहरुले उच्च तहको मह¤व, उद्देश्य अनि गरिमा बोक्न सफल भएको छ त ? के यस्ता महोत्सवले आमजनताको हितमा सहयोग गर्न सफल भएको छ त ? के यस्ता महोत्सवले जनहित, जनस्वास्थ्य तथा आर्थिक सहयोगमा आमनागरिकलाई टेवा प्रदान गरेको छ त ? यस्ता प्रश्नहरु जनताका सामु राख्ने हो भने केही प्रतिशतबाहेक प्रचण्ड बहुमतले सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक उत्तर दिनेमा प्रष्टता नै देखिन्छ । अतः किन आमनागरिकहरु मेला/महोत्सवप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दछन् त ? महोत्सव के हुनुपथ्र्यो ? के भएन ? किन दर्शकहरु मेला/महोत्सवप्रति घट्दो क्रेज राख्न थालेका छन् त ? यी सबै प्रश्नहरुका पछाडि निम्न कारणहरु देखिन्छन् :
महोत्सवको उद्देश्य किटान गर्न नसक्नु
अवश्य हरेक महोत्सवले आफ्नै भिन्न किसिमको उद्देश्य बोकेको हुन्छ । साँस्कृतिक उत्थानको लागि गरिने महोत्सव, आर्थिक सफलताका लागि गरिने महोत्सव, स्थानविशेष चिनारीका लागि गरिने महोत्सवजस्ता अनेकन उद्देश्य पूर्तिका लागि महोत्सव आयोजना हुने गर्दछ । अतः कुनै पनि महोत्सव आयोजना पूर्वउद्देश्य किटान गरी सोहीअनुरुपको नामाकरण गर्दा महोत्सवले सफलताको कसी छुन पुग्दछ । तर, जति पनि मेला–महोत्सवहरु सञ्चालन भएका छन् र हुँदैछन्, तिनीहरुको नाम तथा उद्देश्य एकातिर छ तर महोत्सव अर्कोतिर फर्केको देखिन्छ । जस्तो कि रत्ननगर महोत्सव प्रायः सञ्चालन भैरहने महोत्सव हो । रत्ननगर नाम भएता पनि रत्ननगरको मूल भूगोल र जनमानसलाई छुनै नमिल्ने गरी टिकौली जंगलको एकान्तस्थलमा गरेको पाइन्छ । यस महोत्सवले भरतपुरलगायतका दर्शकलाई लक्षित गरी स्थान तोकेको त पाइन्छ तर आमदर्शकले न त रत्ननगर देख्न पाउँछन् न त बुझ्न पाउँछन्, रत्ननगर छुनसमेत पाउँदैनन् । यसैगरी थारु समुदायद्वारा सञ्चालन गरिने खिचरा महोत्सव थारु संस्कृति एवं परम्परासँग गारिएर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा अन्य जातजातिका खानाका परिकार तथा भड्किला हिन्दी नृत्यले बढी स्थान पाएको देखिन्छ । यसैगरी के चितवन महोत्सवले चितवनको आमप्रतिनिधित्व गर्न सकेको छ त ? पटिहानी महोत्सवले पटिहानीको संस्कृति तथा आर्थिक उत्थानमा कस्तो सहयोग गरेको छ त ? मलाई लाग्दछ, अधिकांश महोत्सवको नामाकरण र उद्देश्य मेल खाएको देखिँदैन । अतः उद्देश्यबिनाका महोत्सव केवल ठूलो हाटबजारभन्दा फरक नहुने तथ्य प्रष्टै छ ।
टिकट तथा स्टल बिक्रीलाई सफलताको प्रमुख कडी मान्नु
महोत्सव आयोजक संघसंस्था एवं व्यक्तिहरुले महोत्सव सफलता तथा असफलताको प्रमुख कडी टिकट बिक्री र स्टल बिक्रीलाई प्रमुख आधार मान्ने परम्पराले यस पर्वको गरिमा खुम्चन पुगेको छ । यति मूल्यबराबरको टिकट तथा स्टल बिक्री भयो, गत सालभन्दा बढी भयो, सफल भयोजस्ता बिक्रीमुखी उद्देश्यलाई प्रमुख आधार मानेर सफलताको उचाइ नाप्ने परम्पराले मेलामहोत्सवको गरिमा घटाएको छ । अतः महोत्सव आयोजकले टिकट बिक्रीको नाफालाई प्राथमिकता दिनुको साटो आमजनजीविकामा पारेको सकारात्मक प्रभावलाई बढी मह¤व दिने हो भने यस्ता महोत्सव एउटा महाउत्सव बन्न सक्छ, न कि विगभिलज मार्केट ।
जनस्वास्थ्यप्रति उदासिन देखिनु
हजारौँको संख्यामा आमनागरिकलाई सम्मोहन गरी एकैस्थानमा उपस्थित गरी बन्द व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजित महोत्सवहरु जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अति खतराजन्य स्थान बन्न पुगेका छन् । कति क्षेत्रफलमा कति संख्यामा मानिस प्रवेश गर्नु हुन्छ ? कति व्यक्तिलाई कति शौचालय अनि खानेपानी, उपचारकक्ष, एम्बुलेन्स चाहिन्छ ? यस्ता आमजनस्वास्थ्यका बारेमा आयोजकहरुले पूर्वव्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी विषयहरुप्रति झारा टार्नेगरी आमजनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने यस्ता महोत्सवहरु रोग संक्रमणको कैन्द्र नै बन्न पुगेको छ । स्थानको क्षमता प्रभाव नगरी लाखौँको संख्यामा कुहिरीमण्डल, धूलोधुँवा उडाउँदै आमजनतालाई प्रवेश गराउँदा सयौँ व्यक्तिहरु विशेषगरी बालबालिका तथा वृद्ध–वृद्धाहरुमा श्वासप्रश्वासको समस्या, मुटुरोगमा संक्रमण, जलवियोजनजस्ता अनेकन रोगहरुको सिकार हुन पुग्दछन् । अति कोलाहल, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषणले गर्दा कान, नाक तथा आँखाको रोगको सिकार बन्न पुग्दछन् महोत्सव क्षेत्रमा । २–४ वटा प्लाष्टिकहरुले बेरिएका खुल्ला शौचालय र लाखौँको संख्यामा मानिसको प्रवेशले महोत्सव भनेको गरिब देशको एउटा नाङ्गो लक्षण नै बन्न पुगेको छ । अझ महोत्सवलाई वर्षदिनभरिको आम्दानीको स्रोत ठान्ने खुल्ला होटल, चटपटे, पानीपुरी तथा अन्य खाद्यान्नका व्यापारीहरुले गर्दा त महोत्सव, जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अति खतराजन्य क्षेत्र बन्न पुगेको छ ।
लुटतन्त्रको अखडा बन्नु
महोत्सव एक जनहितका लागि सञ्चालित कार्यक्रम हुनुपर्नेमा यसको ठीकविपरीत अचेल सञ्चालन हुने महोत्सवहरुले जनतालाई धूलो खुवाएर ब्रह्मलुट गर्ने केन्द्र बन्न पुगेको छ । प्रवेश टिकटको मूल्यदेखि महोत्सवमा राखिएका वस्तु तथा सामानहरुको मूल्य सामान्यभन्दा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म महङ्गो हुने गर्दछ । अझ यस्ता बन्द व्यवसायहरुमा उचित निगरानी तथा निरीक्षण नहुने हुँदा मिति गुज्रिएका, मिसावट गरिएका, डिस्पोज गर्ने बेलाका सामानहरु बिक्री गर्ने सुरक्षित केन्द्र नै बन्न पुगेको छ । त्यसैगरी होटलजन्य वस्तुहरुको मूल्यको उचाइले पाँचतारे होटलको झल्को दिने दृश्य देखिन्छ महोत्सवमा । अझ विहारबाट आयातित फनपार्क, चिल्डे«न पार्क तथा अस्वस्थ खेलले लिने शुल्कले नेपाली सर्वसाधारण व्यक्तिलाई थला नै पार्ने गर्दछ महोत्सवभित्र । अतः सारमा महोत्सव भनेको मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरुका लागि आम्दानीको ठूलो केन्द्र बनेको छ भने सर्वसाधारणको लागि लुटको चक्रब्यूह बन्न पुगेको छ ।
संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यतामाथिको नाङ्गो नाच
सस्तो लोकप्रियताका साथ उच्च नाफाका उद्देश्य बोकेका यस्ता विग हाटबजारहरुले नेपाली लोकसंस्कृति, भेषभुषा एवं कला मनोरञ्जनलाई विकृत तुल्याउने काम गरेको छ । मौलिक स्थानीय कलाकारलाई स्थान नदिई नाङ्गा, छाडा एवं अश्लिल गाना तथा डान्सहरुले गर्दा जनतामा विकृत संस्कृतिको अभ्यास गर्ने थलो बन्न पुगेको छ हाम्रा महोत्सवहरु । साँच्चै भन्नुपर्दा कतिपय महोत्सवमा त परिवारका साथ बस्नै नसकिने खालका हुने गरेका छन् । कथित आयातित विकृत कलाकारहरुले मनोरञ्जनको नाममा हाम्रा संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यतामाथि नाङ्गो नाच प्रदर्शन गरेर महोत्सवलाई विकृत तुल्याउने काम भएको छ ।
शान्ति सुरक्षाको लागि जोखिम क्षेत्र
महोत्सवमा बालबालिका, महिला तथा वृद्धवृद्धाहरुदेखि सोझा सज्जन व्यक्तिहरुको ठूलो एवं बाक्लो उपस्थिति हुने हुनाले विकृत तथा आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरुका लागि यस्ता महोत्सवहरु बाली भित्र्याउने मौसमजस्तो बन्ने गर्दछ । कैयौँ व्यक्तिहरु पाकेटमारको सिकार बन्ने गरेका छन् भने कतिपय सुनजन्य गरगहना लुटिने गर्दछन् । त्यसैगरी छाडा तथा अश्लिल ग्याङहरुको लडाइँ झगडाले महोत्सवहरु शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले एक जोखिम क्षेत्र देखिएको प्रष्ट नै हुन्छ । न्यून संख्यामा खटिने प्रहरीले ठूलो भीडभित्र हुने लुटपाट तथा झैझगडालाई न्यूनीकरण गर्न गठित हुने कुरा प्रष्ट नै छ । अतः मेलामहोत्सव हचुवाका भरमा सञ्चालन गर्नु आफैँमा जोेखिमपूर्ण कार्य हो । त्यस कार्यक्रममा प्रवेश गरेका हरेक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व आयोजकको नै हो । यसको लागि सुरक्षा निकाय एवं स्थानीय सुरक्षा इकाइको सहयोग र समन्वयलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । अन्यथा यस्ता महोत्सव धेरैका लागि असुरक्षित स्थान बन्ने नै गर्दछ ।
महंगो एवं अस्तव्यस्त पार्किङ
हजारौँको संख्यामा सवारीसाधनहरु आउने हुँदा मेलामहोत्सवहरु पार्किङको समस्यामा पर्ने गरेका छन् । एक त स्थान अभाव अर्कोतर्फ महंगो पार्किङ शुल्कले गर्दा सवारीसाधनका साथ प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुका लागि महोत्सव समस्यायुक्त स्थल बन्ने गर्दछ । हेलमेट हराउने, तेलचोरी, गाडी स्क्र्याचदेखि बाइक चोरीने समस्याहरु धेरैजसो महोत्सवका लागि सामान्य घटना बन्ने गरेका छन् । त्यसैगरी महोत्सव क्षेत्रका हाइवे तथा बाटाघाटामा यत्रतत्र राखिने सवारीसाधनहरुले कैयौँ दुर्घटना हुने गरेका छन् । अतः मेलामहोत्सव सञ्चालकहरुले पार्किङलाई व्यवस्थित, सुरक्षित एवं सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ ।
परम्परागत महोत्सव शैली
हरेकजसो मेला–महोत्सवहरुको उदघाटन, सञ्चालन अनि अन्त्य एकैखाले हुने गर्दछ । कुनै पनि मेलामहोत्सवमा कुनै पनि किसिमको नवीन प्रविधि अनि नवीन प्रयोगको वस्तु तथा साधनको प्रदर्शनी गरेको पाइँदैन । कुनै अलोकप्रिय नेताद्वारा उद्घाटन हुने मेलामहोत्सवको अन्त्य झनै अलोकप्रिय नेताको हातबाट हुने गर्दछ ।
अनि हाटबजारमा राखिने सामानहरुमा आकर्षकरुपमा छुटको अफर टाँसी सोझा ग्राहक झुक्याउनेबाहेक खासै नयाँ प्रस्तुति नहुने हुँदा सचेत नागरिकहरु मेलामहोत्सवलाई आलुभातको संज्ञा दिने गर्दछन् । अतः मेला महोत्सव आयोजकहरुले हरेक प्रस्तुतीलाई कुनै न कुनै प्रकारको नविनता प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । जसले कार्यक्रमलाई सफल, सक्रिय एवं जीवन्त बनाउन गद्दत गर्दछ ।
वास्तवमा महोत्सव महाउत्सव नै हुनु पर्दछ र बनाउनु पर्दछ । यसलाई कुनै एक क्षेत्र समुदायभन्दा पनि सम्पूर्ण नेपालीको पर्व बनाउनेतर्फ यस्ता कार्यक्रममा आयोजकहरु क्रियाशील हुनु पर्दछ । यसका लागि आयोजक संघसंस्थाहरुले बृहत भेला गराई उपयुक्त उद्देश्य किटान गरी नामाकरण गर्नु पर्दछ । उपयुक्त उद्देश्य बोकेका महोत्सवले उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । आमजनतालाई उक्त स्थानको अवलोकन गर्न सहज बनाउनु पर्दछ न कि ढाड भाँचिने प्रवेश टिकट बेचेर हुने खानेको महोत्सव बनाउनु हुँदैन । यस्ता टिकट बेच्ने कार्यलाई रोक्नको लागि स्थानीय सरकारले हस्ताक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । साथै, जनस्वास्थ्यका सवालमा अध्ययन गरी कति क्षेत्रफलमा कति व्यक्ति प्रवेश योग्य हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नु पर्दछ । साथै सोहीअनुसारको सफा ट्वाइलेट अनि खानेपानीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
अखाद्यवस्तु, मिति सकिएका वस्तु, मिसावट तथा अस्वस्थ्य खुला खानेकुरालाई निरीक्षण गरी त्यस्ता व्यापारीहरुलाई दण्ड सजाय दिनु पर्दछ । महोत्सवमा हुने मनोमानी महँगीलाई रोक्न प्रशासन अगाडि बढ्नु पर्दछ । टिकट सक्दो निःशुल्क गर्नु पर्दछ । तर, सम्भव नभएमा सामान्य शुल्क लिनु उपयुक्त हुन्छ यसमा पनि वृद्ध, दलित, अपाङ्ग, बालबालिका तथा विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी भारतीय भुलभुलैया, फनपार्क, गेमपार्कहरुलाई पूर्ण बन्द गरी नेपाली स्थानीय लिङ्गेपिङ, रिगटे पिङ, ढिकिच्याउँ, गाडायात्रा, घोडा, हात्ती, डुङ्गा यात्रालगायत मौलिक मनोरञ्जनका साधनहरुलाई अति सरल शुल्कमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी मौलिक खाना, लेकाली खानाजस्ता स्थानीय जनजातिका परिकारहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सके स्थानीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नुको साथसाथै विदेशतिर जाने राष्ट्रिय सम्पत्ति रोक्न सकिन्छ ।
अन्तमा, महोत्सवमा सानो क्षेत्रमा ठूलो मानव संख्या उत्रिने हुँदा आकस्मिक रुपमा देखिने भाग दौड, चोरी, हिंसा एवं आतंकलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रशासन र आयोजक सधँै चनाखो हुनुपर्दछ । साथै यस्ता महोत्सवहरुमा आगलागीको खतरा हुने हुँदा उक्त विपत्तिलाई रोक्नको लागि तयारी अवस्थामा आवश्यक वारुणयन्त्रहरु सधैँ तयारी अवस्थामा राखिनु पर्दछ ।
व्यवस्थित महोत्सवले आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक उत्थानमा टेवा दिने गर्दछ भने अव्यवस्थित महोत्सव कुनै पनि समय मानवीय समस्याको कुण्ड बन्न बेरै लाग्दैन । अतः महोत्सवमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु अनुशासित एवं गम्भीर भई जवाफदेहीका साथै कार्य सम्पादन गर्नको लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसैले महोत्सवलाई महाउत्सव बनाउने गर्दछ ।